Fil d'actualités du 25/06/2019
25/06/2019 - 12:00 : FESTIVAL DES BALEINES:Ho tanterahina ao Sainte-Marie ny andian'ny faha 4 ho an'ny "festival des baleines" izay vinavinaina ho tanterahina ny 11 katramin'ny faha 14 jolay hoavy izao.
25/06/2019 - 11:30 : FETIM-PIRENENA:Anio tolakandro no fantatra fa higadona etsy amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ny filohan'ny Rwandais Paul Kagame.
25/06/2019 - 11:00 : MATSO:Nanampan-kevitra ny fanjakana fa ampitoviana daholo ny famindran'ireo tafika mandray anjara amin'ny matso izay atao etsy amin'ny kianjabe ny Mahamasina rahampitso faha 26 Jona.
25/06/2019 - 10:30 : CAN 2019:Manomantena fatratra ny Barea ihaona amin'ny Burundi ny Alakamisy faha 27 Jona ho avy izao.
25/06/2019 - 10:00 : CYBERCRIMINALITE:Tovolahy iray MD fa nanalabaraka minisitra tao anaty tambazotra serasera "facebook".
25/06/2019 - 09:30 : ASARAMANITRA:Anomboka anio ny fankalazana ny faha 59 nahazoana ny fahaleovan-tena ka hisy ny afomanga izay hatao etsy Anosy anio ariva.
25/06/2019 - 09:00 : SABOTSY-NAMEHANA:Mpanao biriky iray no nisy namono teny Sabotsy Namehana io maraina io.
24/06/2019 - 15:45 : 67HA:lehilahy iray nitondra moto no notifirin'ny jiolahy tetsy 67ha io atoandro io.
24/06/2019 - 15:45 : FETIM-PIRENENA:mpitandron'ny filaminana miisa telo arivo no andray anjara mandritra ny Matso izay ho tanterahana etsy Mahamasina ny faha 26 jona ho avy izao.
24/06/2019 - 15:15 : FAHASALAMANA :Nanolotra fitaovana ho an'ny minisiteran'ny fahasalamana ny filoham-pirenena androany.
Archive du 20180221
Rajao sy Rajoelina Samy mpamitaka
Mitohy ny lonilony eo amin’ny filoha ankehitriny Hery Rajaonarimampianina sy ny filohan’ny tetezamita teo aloha Andry Rajoelina. Maro no mametra-panontaniana hatramin’izao, inona marina no tena nampiady, ka nanilihan’ny HVM an-dRajoelina sy ny ekipany ?
Fifidianana sy raharaham-pirenena Mampiahiahy ny fihetsik’i Lafrantsa
Akaiky ny fifidianana ary fahita eto amintsika ny fidirana an-tsehatry ny firenen-dehibe amin’izany sy amin’ny raharaham-pirenena ankapobeny na mivantana na an-kolaka, io ilay antsoina hoe : “géopolitique”.
Vina politika akaiky fifidianana Santatry ny fitadiavan-tseza
Saika namoaka boky niraketany izay noheverin’izy ireo ho vinany hatrany ireo filoham-pirenena nandalo teto Madagasikara, indrindra, rehefa akaiky fifidianana tahaka izao. Nanana ny « politikan’ny kibo » ny filoha Philibert Tsiranana raha nitondra tamin’ny taona 1958 ka hatramin’ny 1972.
Gaboraraka ao amin’ny kaominin’i Toamasina Nametra-pialana ny filohan’ny mpanolotsaina
Sambany teo amin’ny tantaran’ny kaominin’i Toamasina no nisy filohan’ny mpanolotsain’ny tanàna nametra-pialana noho ny zava-misy tsy mandeha amin’ny laoniny sy tsy manaraka ny lalàna ao Toamasina.
Fampidanganana vidin-jiro Hararaotina ny fahalemen’ny vahoaka
Midangana ny vidin-jiro ankehitriny. Tafakatra hatrany amin’ny 80% ho an’ny mpanjifa mampiasa ny « tarif 16 ». Vidiny tokana 370Ar/kwh, fa tsy misy intsony ny “1ére tranche” sy ny “2éme tranche” nanomboka ny faktiora janoary 2018.
Rotsak’orana Mbola tena hatevina amin’ity volana febroary ity
Na dia efa mamaramparana ny volana febroary aza isika ankehitriny dia fantatra fa mbola tena hatevina tanteraka ny rotsak’orana eto an-drenivohitra sy any amin’ny Faritra, raha araka ny fanadihadiana natao teo anivon’ny sampana mpamantatra ny toetr’andro.
JMJ andiany faha-9 any Mahajanga Nahemotra noho ny fifanitsahana amin’ny BEPC
Hahemotra ny 8-14 oktobra ho avy izao ny Fihaonamben’ny tanora na ny JMJ Mada andiany faha-9 eo anivon’ny fiangonana katolika, any Mahajanga noho ny antony samihafa.
Raharaha Delors Any amin’ny fitsarana ny baolina
Anisan’ny raharaha nitana ny sain’ny maro tato ho ato ny mikasika ny fampidirana am-ponja ny tale kabinetran’ny lehiben’ny faritra Vatovavy Fitovinany Atoa Delors.
Tsy anareo irery i Gasikara !
Manjaka eto amintsika amin’izao ny tsolotra sy risoriso amin’ny fanendrena olona ambony sy fampidirana olona amin’ireny fifaninanana hidirana amina sekoly ambony manofana ho mpiasam-panjakana ireny.
Andohatapenaka Ahiana hikorontana anio
Na dia teo aza ny hetsika fanoherana ny fifindran’ny Taksibrosy nataon’ireo mpivarotra teny amin’ny fasan’ny Karana, dia nanamafy halina ny tale jeneralin’ny ATT ny kolonely Andry Rakotondrazaka fa tsy maintsy atomboka anio alarobia ny fifindran’ireo mpitatitra miasa amin’ny lalam-pirenena voalohany (RN1) izay ahitana koperativa 14.
TSENAM-BARO-PANJAKANA MANJAKA NY RISORISO
Tsy misy ny mangarahara amin’ny tsenam-baro-panjakana fa kitranoantrano no misy eto Madagasikara. Fomba mody atao fotsiny ny fampafahantarana ny tsena ho an’ny daholobe (appeld’offre) fa efa fantatry ny minisitera ny hahazo. Mandeha be ny afera, araka izany,
OMDA Mampitombo ny toekarena amin’ny famoronan’asa
Anio no hanatanterahana ny fifampiarabana nahatrarana ny taona 2018 amin’ireo mpikambana ato amin’ny OMDA izay atao ao amin’ny Kianjan’ny Kanto etsy Mahamasina.